Tea uwoyela isihlahla, ukusetshenziswa
Tea tree, zimila Australia, kungokwalabo umbomvana umndeni. Kunezinhlobo eziningi zezitshalo eziningi, kodwa kuphela omunye wabo kufanelekile ukukhiqizwa isinqandakuvunda uwoyela. Lo muthi ubizwa ngokuthi Alt-Malaleuza Folis ezaziwayo. Umkhiqizo akhishwa amaqabunga awo, futhi kunenkolelo eyaziwayo esetshenziselwa fungal nezifo ezibangelwa amagciwane kwesikhumba futhi nolwelwesi lwamafinyila.
Tea uwoyela isihlahla, ukusetshenziswa esiza ukuqinisa amasosha omzimba, kusiza eziningi izifo. Ukwakheka kwalo kuba nezakhi angaphezu kwamashumi amane nesishiyagalombili kuhlanganise viridoflorsi esiyingqayizivele. Le ngxenye akanayo nezinye izitshalo, okuyinto amafutha nethonya amagciwane, kuhlanganise zikagamthilini kanye rosemary. Ngaphezu kwalokho, ngo-umkhiqizo okwelapha kuhlanganisa terpinene yemvelo kanye terpineol, limonene futhi cineol, pinene futhi sabinene, cymene, kanye nezinye izithako okunempilo.
Tea uwoyela isihlahla, ukusetshenziswa okuyinto eyenza yokuvimbela umsebenzi gonococci futhi staphylococci, streptococci, pneumococci, Escherichia coli nesikhunta, ine inzuzo ebalulekile, sivezwe kula ukungabi khona komzimba okufana ukoma, ukulunywa futhi uyakekela kwesikhumba. Lo mkhiqizo wemvelo akunakudluliswa ezinobuthi futhi has a eyinqaba iphunga okunoshukela nge camphor amanothi ugodo. Ngo ukuthungwa nomuthi wamafutha sokuphulukiswa, ukukhanya namanzi oluyingozi. Kungaba kungekho nto enemibala emihle noma abe-tint kancane aphuzi.
Tea uwoyela isihlahla, ukusetshenziswa okuyinto Kunconywa njengoba eqinile isinqandakuvunda, kuba izikhathi eziyisishiyagalombili kuphumelela ngaphezu carbolic acid, futhi uma kuqhathaniswa nezenzo zakhe nge phenol - nambili. Kwemvelo futhi uthola ukusetshenziswa kwalo omuhle njengomdala namagciwane, eqeda ukuvuvukala kanye germicide.
Amafutha ebalulekile kwesihlahla Malaleuza Alterna-Folis Kunconywa izifo ezihlukahlukene okubangelwa komkhuhlane. umsebenzi wayo isetshenziswa sinusitis nokukhwehlela, umkhuhlane, ukucinana kwemigudu yokuphefumula, namathansela, futhi njengoba isakhi izindlela ezisetshenziselwa massage and ephefumula. Ukuphulukiswa Cold, umkhiqizo enza nolwelwesi lwamafinyila. Kule ndaba, it is kabanzi sikaphalafini uwoyela.
Tea uwoyela isihlahla, okuyinto kunciphisa ukusetshenziswa ukushisa Kunconywa izimo ezibangela imfiva. Active isinyathelo izakhi Imikhiqizo Imithi iwukudambisa ubuthi ukulunywa izinambuzane igazi-abancela, ukusiza ukuba ulwe nezifo zesikhumba, okuyinto ihlanganisa i-herpes, eczema, futhi inkukhu Pox. Amafutha eyatholakala kusukela amaqabunga esihlahla itiye, kakhulu kuqinisa umzimba ozivikela ngayo.
Umkhiqizo zemvelo eziyingqayizivele saziwa emhlabeni wonke Cosmetology futhi nezesikhumba umphumela isinqandakuvunda futhi eqeda ukuvuvukala emzimbeni. Lezi izindawo amafutha ezahlukene kwezicelo. Umkhiqizo azabalaze ngokuphumelelayo izinqubo chronic ukuvuvukala ezenzeka esikhumbeni. Ukusetshenziswa Its has umphumela magnificent khona induna kanye ukuqubuka pustular. Amafutha kusiza ukuqeda dermatitis, viral, umsuka yisinanakazana futhi amagciwane. It kususa lingene elikhanyayo futhi eczema esikhumbeni.
Magnificent ukuphulukiswa izakhiwo yezingxenye ezakha uwoyela, ukusiza ukuqeda ukuvuvukala kanye ukulunywa, ububomvu kanye ukucasuka. Lokhu kusibuyisela umbala yemvelo kanye isikhumba ebusweni. Kabanzi uwoyela tea tree izinwele. Ukuze umphumela wawo sengezwe imoto noma conditioner. izinwele Waphatha namandla, ukubukeka enempilo. Lokhu kungabi sengxenyeni dandruff.
We amakhambi ahlukahlukene okwelapha amafutha abalulekile atholakala. isicelo sabo may kokubili ngokwehlukana futhi isebenzise inhlanganisela yazo. Ngokwesibonelo, balahle ukujuluka ngokweqile, uwoyela tea tree isetshenziswa ingxube umkhiqizo esikweyoku nerosemary.
Myostimulation umuntu - ekulweni izinguquko ezihlobene nokukhula